Indlela Yokubuyiselwa Izilungiselelo ze-Firefox kuma-Values ​​abo ahlukile
Iziphequluli Iziqondiso namaTutorials
Lokhu kufundisa kuhloswe kuphela kubasebenzisi abasebenzisa isiphequluli se-Mozilla Firefox ku-Linux, Mac OS X noma Windows izinhlelo zokusebenza.
I-Mozilla inikeza ukusebenza okuningi okudingekayo okubuyisela isiphequluli esimweni sayo esingaguquki ngaphandle kokususa idatha ebalulekile kuhlanganise amabhukumaka , umlando wokuphequlula , amakhukhi, amaphasiwedi, nolwazi lokugcwalisa ngokuzenzakalela. Ngezinye izikhathi i-Firefox ingahle igwetshwe ngokuphazamiseka nokuhamba kancane. Isizathu esiyimbangela yalezi zinkinga ezingenakubekezeka azihlali zicacile, kusale ngisho nomsebenzisi onolwazi oluningi kakhulu ongenalutho futhi ekhungathekile.
Kungani Ungase Ufune Ukubuyisela Izilungiselelo Ezizenzakalelayo ku-Firefox
Iningi lezinkinga ezihlangabezane ne-Firefox zingalungiswa ngokubuyisa uhlelo lokusebenza kuzilungiselelo zalo zemboni. Nokho, ezipheqululini eziningi, lokhu kubizwa ngokuthi ukusetha kabusha kabusha imiphumela ekulahlekelweni kwezingxenye zomsebenzisi ezibalulekile njengezo okukhulunywe ngenhla. Ubuhle besici se- Refresh Firefox sisezindabeni zokuthi kufezwa kanjani lokhu kubuyiselwa.
I-Firefox igcina iningi lezilungiselelo eziqondene nomsebenzisi nedatha kwifolda yefayili, indawo yokugcina efakwe endaweni ehlukile kusuka kulesi sicelo ngokwayo. Lokhu ngenhloso, ukuqinisekisa ukuthi ulwazi lwakho luhlala luqinile lapho kwenzeka ukuthi i-Firefox ibonakaliswe. Qala kabusha i-Firefox isebenzisa lolu lwakhiwo ngokwakha ifolda entsha yephrofayela yenkampani ngenkathi ilondoloza idatha yakho ebalulekile kakhulu.
Leli thuluzi elihle lilungisa iningi lezinkinga ezivamile ze-Firefox ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa nje, ugcine isikhathi nesimiso esiyigugu. Lesi sifundo esilandelayo sichaza i- Refresh Firefox ngokuningiliziwe futhi ichaza ukuthi singayisebenzisa kanjani kuzo zonke amapulatifomu asekelwayo.
Indlela Yokubuyisa Izilungiselelo Ezizenzakalelayo ze-Firefox
Okokuqala, vula isiphequluli sakho se-Firefox. Chofoza inkinobho yemenyu eyinhloko, etholakala ekhoneni elingaphezulu ngakwesokudla lewindi lesiphequluli sakho futhi imelwe imigqa emithathu enezingqimba. Uma imenyu yokuphuma ivela ibhofoza inkinobho yemenyu yosizo , etholakala phansi kwefasitela futhi ekhonjiswe uphawu lombuzo obomvu nomhlophe. Emenyu Yezosizo, chofoza inketho ye- Troubleshooting Information .
Sicela uqaphele ukuthi ungasebenzisa isinqamuleli esilandelayo esikhundleni sokuchofoza kule nto yemenyu:
Thayipha mayelana: ukusekelwa kubha yekheli le-Firefox.
Ukuxazulula Izinkinga ze-Firefox ekhasini le- Ulwazi kufanele manje libonakale, liboniswe kuthebhu entsha noma iwindi. Ukusetha kabusha isiphequluli sakho esimweni sayo esizenzakalelayo, chofoza inkinobho ye- Refresh Firefox (ejikelezwe esibonelweni esingenhla). Inkulumo yokuqinisekisa kufanele iboniswe manje, ibuze uma ufuna ukusetha kabusha i-Firefox esimweni sayo sokuqala. Ukuze uqale inqubo, chofoza inkinobho ye- Refresh Firefox etholakala ngaphansi kwalokhu lengxoxo.
Phakathi nenqubo yokusetha kabusha, ungase ubone ngokufingqiwe iwindi lokungenisa elifakiwe le-Firefox. Asikho isenzo esidingekayo ngakini kule phuzu, njengoba iwindi lizovala futhi isiphequluli sizoqala kabusha esimweni sayo esizenzakalelayo.
Ngaphambi kokusetha kabusha i-Firefox, qaphela ukuthi kuphela ulwazi olulandelayo oluzogcinwa.
Amabhukhimakhi: Iqoqo elenziwe ngumsebenzisi lokuxhumanisa ngqo kumakhasi ethize e-Web
Umlando Wokuphequlula: Irekhodi lazo zonke amawebhusayithi owavakashele ngaphakathi kwe-Firefox
Amakhukhi: Amafayela ombhalo amancane agcinwe kwi-hard drive yakho noma idivayisi yeselula uma uvakashela amawebhusayithi athile. Ikhukhi ngayinye isetshenziselwa ukwazisa iseva yeWebhu uma ubuyela kusayithi layo, futhi kungasiza ekukhumbuleni izilungiselelo ezithile kubandakanya iziqinisekiso zokuqinisekisa
Ifomu Ugcwalisa Ukwaziswa Okuzenzakalelayo: Noma kunini lapho ufaka ulwazi kufomu kwiwebhusayithi, i-Firefox ingagcina enye yale datha. Isibonelo, kungenzeka ukuthi uke waphawula lapho ugcwalisa igama lakho ngesimo sokuthi emva kokuthayipha incwadi yokuqala noma igama lakho lonke liba khona ensimini. Lokhu kungenxa yokuthi i-Firefox igcine igama lakho kusuka ekufakeni kufomu elingaphambilini.
Amaphasiwedi alondoloziwe: Uma ufaka iphasiwedi ekhasini leWeb ukuze uthole ukungena ngemvume kwe-imeyili, i-Firefox izovame ukubuza ukuthi ungathanda yini ukuba iphasiwedi ikhunjulwe. Uma ukhetha iphasiwedi ukuba ikhunjulwe, izogcinwa yisiphequluli bese isetshenziswe esikhathini esizayo lapho uvakashela leli khasi leWebhu.
Izinto eziningi eziphawulekayo ezibandakanya kodwa ezingekho kuphela ezandisweni ezifakiwe, izingqikithi, amaqembu amathebhu, izinjini zokusesha, nomlando wokulanda azigcinwa ngesikhathi senqubo yokusetha kabusha.
Amathiphu angu-8 wokusebenzisa i-Safari nge-OS X
Indlela Yokuhlela Izilungiselelo Zokubuyekeza ku-Mozilla Firefox
Ukusebenzisa izinqamuleli ze-Ad Bar Ukulawula isiphequluli se-Opera
Ukusebenzisa amasevisi weWebhu nezinkonzo Zokubikezela ku-Google Chrome
Ungasusa kanjani i-Bing
Indlela Yokwenza IE11 Isiphequluli Esizenzakalelayo ku-Windows
Susa amafayela we-Inthanethi yesikhashana nama-Cookies
Indlela Yokufaka Izici Zokufinyeleleka ku-Google Chrome
Kuyini ifayela le-HWP?
'Grand Theft Auto: Amakhodi e-San Andreas' Amakhohlisi
Indlela Yokuqeda Ngokushesha I-iPhone White Screen of Death
Ukubuka kuqala: iPad 2 yesibili ye-Apple
Izinhlelo Zokukukhokhela Ukuthenga Groceries
Kuyini iVimeo? I-Intro kwi-Plateform Yokukwabelana ngevidiyo
Yenza uhlelo oluhlanzekile lwe-OS X El Capitan ku-Mac yakho
Isikhathi Sokuqala Kwamakhosi
Indlela yokufihla kusuka ku-Google
I-Hoverboards engcono kakhulu yokuthenga ngo-2018
I-Android OS Vs. IOS Apple - Yikuphi Okungcono Kubathuthukisi?
Indlela Elula kakhulu Yokuxhuma Abakhulumi Ngetambo Yomlomo
Kuyini Icala Lekhompyutha?
Yini OOAK Eshoyo?
Ungabelana kanjani Izinhlelo zokusebenza ze-Apple TV
Kuyini 'Izinqubo'? Yithini Izinkampani?
Indlela Yokusebenzisa Isici se-New Dynamic Symbols se-Adobe Illustrator CC 210
I-Routers engu-10 ehamba phambili ne-Longest Range
Indlela Ukusebenzisa IRekhodi Ehlanzekile Igcina Amaqoqo E-Vinyl Sounding Pristine
IMovie 11 Izikhathi - Izikhathi ezibekiwe noma ezilinganiselwe